धनुषामा पैसा छरेर हिडनेलाई र्‍यापिड टेस्टमा कोरोना संक्रमण देखियो – Enepali News
धनुषामा पैसा छरेर हिडनेलाई र्‍यापिड टेस्टमा कोरोना संक्रमण देखियो
April 19, 2020 201
काठमडौं । जनकपुरको व्यस्त बजारमा पैसा छरेर हिड्ने हिड्ने महिलामा र्‍यापिड टेस्ट गर्दा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । शनिबार गरिएको द्रुत परीक्षण विधी (आरडिटी)मा एक जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिारी कोशहरि निरौलाले डिसी नेपाललाई बताए ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाका अनुसार अहिले उनीहरुलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ । आज गरिएको परीक्षणमा आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो ।
‘यो रिपोर्टको आधारमा संक्रमण रहेको भनि पुष्टी गर्न नसकिने हुनाले उनीहरु दुबैको पीसीआर विधिबाट स्वाबको टेस्ट भइरहेको छ’, निरौलाले भने।
जनकपुरधामको महावीर बजार जाने सडकमा पैसा छरेर भागेपछि स्थानीयले संकास्पद भएर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । स्थानीयको उजुरीपछि सो क्षेत्रमा प्रहरीले विशेष निगरानी गरेर छरिएका नोटलाई बरामद गर्नुका साथै चारैतिर सेनिटाइज गरेको थियो । उनिहरुले ५, १० र २० का नेपाली नोटहरु छरेका थिए ।
शुक्रबार स्थानीयको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सीसीटीभी फुटेज निकालेर जनकपुरभरी सर्च अभियाननै चलाएको थियो।
शुक्रबार बाटोमा पैसा छर्दै हिडेका दुवै जना जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं ७ निवासी आमुना खातुन र अलिना खातुन रहेका छन् । उनी दुवै जना नातामा भाउजु र नन्द हुन् ।
प्रदेश २ का प्रहरी प्रवक्ता एसपी जयराज सापकोटाका अनुसार उनिहरुले पैसा छरेर हिड्ने नियत बारे प्रष्ट नभएको बताएका छन् । ‘उनीहरु भारतबाट आएकी हुन भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं, अनुसन्धान पुरा नहुँदासम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन’, एमी सापकोटाले भने ।
Prev‘कोरोना भाइरस पोजिटिभ’ लेखेकै देखेपछि मृ-त्यु ढोकैमा आएर उभिएजस्तो अनुभूति भयो’
Nextलकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
गर्भमा भएको शिशुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको दाबी
बल्ल डराए ट्रम्प : इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा संकटकाल घोषणा (3301)
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2359)
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (1990)
O M G << हेलिकप्टरबाट उद्दार गरिएकी गर्भवती महिलाको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु: (1801)
तपाईंको यो वर्ष कस्तो हुँदैछ ? हेर्नुहोस् ओजराज उपाध्यायले लेखेकाे वार्षिक राशिफल (1784)
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (1744)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1541)
ट्रम्प भन्छन् अब कोरोना निको पार्ने औसधि बनिसक्यो (1515)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1328)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1288)